PMC Speakers – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » Tag Archives: PMC Speakers
Tag Archives: PMC Speakers
Loudspeaker manufacturer PMC has opened new demo studios on the East and West Coasts of the USA withaview to giving recording professionals the opportunity to hear the power and clarity of PMC’s full monitor range. Located in Highland Park, Los Angeles and Bushwick, Brooklyn, New York, the demo studios addasubstantial new dimension to PMC’s US presence, ...
အဆိုပါဟိဂ်သွင်းယူမှုများ PMC MB2 စောင့်ကြည့်ခုနှစ်တွင် Polycorp မီဒီယာ
Harmen Sipkema, Polycorp မီဒီယာ၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပိုင်ရှင် PMC MB2 အဆိုပါဟိဂ်၌သူ၏စတူဒီယိုအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အသီးအနှံရေဒီယို jingles, မှတ်တမ်းတင်ရောထွေးနှင့် post သူတို့ကိုအသုံးပြုနေသည် installed သိရသည်။ သူက "သူတို့ကတစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ရိုးသားသောအသံနှင့်တစ်ဦးလှုံ့ဆော် Pat-on-the-ပြန်သံကိုကြားကအကောင်းတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာသည်ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးတေးရေးဆရာများနှင့်ရောသမမွှေများကဤမော်နီတာစံပြနေသောသူတစ်ဦးဦး, အမျှ" ...
၎င်း၏လက်ဘနွန်ဖြန့်ဖြူးထားသကဲ့သို့ PMC ရက်ချိန်း Boujikian Bros
ဗြိတိန်နိုင်ငံလော်စပီကာထုတ်လုပ်သူ PMC ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတူဒီယိုမော်နီတာ၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့ range ကိုကိုင်တွယ်ဘို့တာဝန်နှင့်အတူလေဗနုန်တော၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးအဖြစ် Boujikian Bros.Co.Ltd ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ဦးပေးသွင်းအဖြစ် 1984 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Boujikian Bros. Co. , Ltd အခုအသံ, အလင်းအမှောင်, မသမာမှုများနှင, ဇာတ်စင်နှင့် AV စနစ်စျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီမှထုတ်ကုန်တစ်ခုအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ လည်းပဲ ...
သူ့ပုဂ္ဂလိကစတူဒီယိုသည်ထိပ်တန်းပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Composer က Nathaniel Méchalyရွေးချယ် PMC စောင့်ကြည့်
ပြင်သစ်တေးရေးဆရာက Nathaniel Méchalyဒီစနစ်ရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများအဖြစ်သူတို့၏အသံများတိကျစွာနှင့်ပွင့်လင်း ကိုးကား. , ပဲရစ်၌သူ၏ပုဂ္ဂလိကစတူဒီယိုထဲမှာ PMC IB2S XBD-တစ်ဦးကမော်နီတာတရံ installed သိရသည်။ အကောင်းဆုံး Liam Neeson သရုပ်ဆောင်အဆိုပါသိမ်းယူ trilogy ပာ၏တေးရေးဆရာအဖြစ်လူသိများ, Méchalyမတိုင်မီရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများနှင့်ကြော်ငြာများအတွက်တေးရေးဆရာအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင် ...
၎င်း၏အမေရိကန်အရောင်းရေးအဖွဲ့ရန် PMC ချိန်းဆိုမှု, Luke စမစ်
လော်စပီကာထုတ်လုပ်သူ PMC PMC ရဲ့ဆုရ Pro ကိုပေး Audio ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကိုယ်စားပြုများအတွက်တာဝန်နှင့်အတူအရောင်း Manager ကို New York မြို့အဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပူးပေါင်းမည်သူကိုလုကာစမစ်၏ချိန်းနှင့်အတူ၎င်း၏အရောင်းအဖွဲ့ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ မိမိအအရောင်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံနဲ့ပေါင်းစပ်နေတဲ့ဂီတပညာရှင်, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် Smith ရဲ့နောက်ခံ, သူ့ကိုဒီအခန်းကဏ္ဍများအတွက်စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းစေ။ အားလုံးရှုထောင့်အကြောင်းကိုအသည်းအသန် ...
PMC ရှမွေလသည် Laflamme ရဲ့အမှတ်ပေးစီမံကိန်းများရန်ရှင်းလင်းမှုပြီးတော့အသေးစိတ်များရရှိစေ
ကနေဒါထုတ်လုပ်သူများနှင့်တေးရေးဆရာရှမွေလသည် Laflamme သူ့ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုများအတွက် PMC IB2S-တစ်ဦးကတစ်ဦး pair တစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်မိမိသစ်ကိုမော်နီတာပို့ဆောင်နေကြသည်ပုံရိပ်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်အတိမ်အနက်ကိုချစ်သောသူကပြောပါတယ်သိရသည်။ "ငါသည်ဂျိမ်း Duhamel, IB1 မော်နီတာတရံပိုင်ဆိုင်မူသောငါ့စတူဒီယိုစက်ရုံမိတ်ဖက်က PMC မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်," ရှမွေလသည် Laflamme ကပြောပါတယ်။ "သူ၏မော်နီတာကြားအာရုံငါ့ကိုယုံကြည် ...
PMC ခရစ် Watson ဟာတစ် immersive နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအတွေ့အကြုံကယ်ယူကူညီမည်
ခရစ် Watson ဟာ recordist ဘီဘီစီအသံကသူဇန်နဝါရီလ 5.1, 25 အပေါ် Wolverhampton ၏တက္ကသိုလ်မှနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကယ်တင်တဲ့အခါမှာသူ့အလုပ်၏နမူနာကိုသရုပ်ပြဖို့ PMC 2018 စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်၏သုံးပြီးလိမ့်မည်။ Watson (chriswatson.net/) ကိုပတ်ဝန်းကျင်၏အသံ, သဘောသဘာဝနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Frozen Planet ကို, အပြာရောင် Planet ကို, အဖြစ်အစီအစဉ်များသည်ဤပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သောတိရိစ္ဆာန်များဖမ်းယူကမ္ဘာကြီးကိုခရီးထွက်ခဲ့ပါသည် ...
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ NJP Studios ကဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရ PMC စောင့်ကြည့် Install လုပ်ဖို့ MGM အသံရွေးကောက်
PMC စောင့်ကြည့်မှုနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးသုံးစတူဒီယိုအားလုံး၏ပိုင်ရှင်ကြောင့် Leos Gerteis တစ် PMC ပန်ကာကဲ့သို့မိမိကိုမိမိကိုဖော်ပြရန်စကားကိုနားထောငျဖို့အံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာထိုဆွစ်ဇာလန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အင်ဂျင်နီယာသူတောင်မှအိမ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ် IB2S ပီတရံရှိကြောင်းဤမျှလောက်ကုမ္ပဏီရဲ့မော်နီတာ likes! Gerteis 1988 အတွက် NJP (နယူး Jungle Productions) တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်ခုရှိပါတယ် ...
AES6မှာ PMC မိတ်ဆက် result2017 Compact Nearfield ု့ကပ်ရေး
ဗြိတိန်နိုင်ငံလော်စပီကာထုတ်လုပ်သူ PMC New York မှာယခုနှစ် AES စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကို (Booth 6) မှာ, result330 တစ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကကျစ်လစ်သိပ်သည်း nearfield ရည်ညွှန်းမော်နီတာမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ ကကုမ္ပဏီ၏လိုလားသူရည်ညွှန်းမော်နီတာနိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားနေသောအဘို့ရှိသမျှကို attribute တွေပေါင်းစပ်အဖြစ် PMC ရဲ့အသစ်နှစ်ခု-လမ်းတက်ကြွ result6 လော်စပီကာတိုင်းအဆင့်တွင်ကယ်တင်တတ်၏။ ဤရွေ့ကားအမြင့်ဆုံး resolution နဲ့အသေးစိတ်တိကျမှန်ကန်နှင့်တိုးချဲ့ဘေ့စ, ပါဝင်သည် ...
အရည်မီဒီယာ Hub ၎င်း၏အသံထုတ်လုပ်မှု်ဆောင်မှုများသည် PMC Speakers ကိုရွေးကောက်ပြီး
အရည်မီဒီယာ Hub, ဗြိတိန်ရဲ့နိယာမမီဒီယာအကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများပံ့ပိုးပေးတအရှင်ရာမှာပွိုအသံအရည်အသွေးကိုသေချာနှင့်အလုပ်တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းတစ်ခန်းအကြားလွတ်လပ်စွာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြု၎င်း၏အသံထုတ်လုပ်မှုအစုံအပေါငျးတို့သညျသုံးအတွက် 7.1 ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက် PMC ပီ installed သိရသည်။ "ကျနော်တို့ကရှေ့များအတွက်နောက်ဘက်ရာထူးနှင့် twotwo.5 စပီကာအဘို့အ PMC twotwo.6 ပီပေါင်းစပ်ရှေးခယျြခဲ့ ...
PMC ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စေရန်၎င်း၏လေဆာချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကယာဉ်မောင်း၏နယူးဘက်စုံကြည့်ရန်ပြီးတော့ ATL ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီယူ
PMC တိုးတက်လာသောအနိမ့်အကြိမ်ရေစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အနာဂတ် drive ကိုယူနစ်နှင့်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဒီဇိုင်းများတစ်ဦးထက်ပိုသောဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ကူညီရန်၎င်း၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနများအတွက်အဆင့်မြင့်လေဆာတိုင်းကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ Ultra-သန့်ရှင်းတိကျမှုအနိမ့်အကြိမ်ရေအချက်အလက်များ၏ပြိုင်ဘက်ကင်းအဆင့်ဆင့်ဖန်တီးပေးသောယင်း၏ ATL (Advance ဂီယာလိုင်း) ဘေ့စတင်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများမှာ Oliver ကဦးဆောင် R & D ကိုအသင်း ...
မက္ကစီကိုများအတွက်၎င်း၏သီးသန့် Pro ကိုပေး Audio ဖြန့်ဖြူးအဖြစ် PMC ရက်ချိန်း Grupo ကို T-Crea
PMC ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များ၏ယင်း၏တစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးများအတွက်တာဝန်နှင့်အတူ, မက္ကစီကို၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးအဖြစ် Grupo ကို T-Crea ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ မက္ကစီကိုစီးတီးတွင်အခြေစိုက်နှင့် CEO ဖြစ်သူ Pedro Luna ကဦးဆောင်, Grupo ကို T-Crea ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုစျေးကွက်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါအုပ်စု 47 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထူထောင်ခဲ့သည့်ဝါယာကြိုးများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ Sucabsa, နှင့်ဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီကို T-Crea ပါဝင်သည် ...
PMC Speakers အကူအညီရစ်ချတ် Marvin Grimm များအတွက်ဂီတကယ်ယူ
ကျော်ကြားတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတေးရေးဆရာရစ်ချတ် Marvin အား NBC ရဲ့မှော်အတတ်စုံထောက်ရဲကိုဒရာမာ, Grimm ၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲများအတွက်ဂီတဖြည့်စွက်, မကြာသေးမီလများအတွင်းတစ်ဦးပင်ပန်းကြမ်းတမ်းအလုပ်အချိန်ဇယားမှတဆင့်မိမိအ PMC MB2S အဓိကမော်နီတာချပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Los Angeles မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုကနေအလုပ်လုပ်သောသူ Marvin, နောက်ပိုင်းအကျယ်အောင်မြင်သော Grimm ထုတ်လုပ်မှုအသင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ...
FONIC'S ပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ SATELLITE စတူဒီယို PMC Speaker ရွေးချယ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်အသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Fonic PMC twotwo.6 စပီကာထည့်သွင်းရန်၎င်း၏စတူဒီယိုနှစ်ခုအတွက်စောင့်ကြည့်မှုအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ အဆိုပါမော်နီတာ Fonic ရဲ့ပိုင်ရှင်များနှင့်တည်ထောင်သူ, Jake Roberts သည်နှင့် Barnaby Temple ကများ၏နေအိမ်များမှာ 5.1 ဂြိုဟ်တုစတူဒီယိုမှာ installed ပါပြီ။ နှစ်ဦးစလုံးစတူဒီယိုစီမံကိန်းများအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်နှင့် Avid S3 စာသင်ခုံများနှင့်တစ်ဦးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ...